Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Sida mid ka mid ah soo saaraha xirfadeed ee adduunka ee la kala duwan ubalaadhan of isticmaalo printer iyo alaabta xafiiska, inaannu wax ka qaadannaa iyo kibirka weyn ee la abuuro wax soo saarka ugu cusub iyo functional. Baahida Office yihiin ballaaran oo naga go'an in aan la kulmo oo dhan oo iyaga ka mid.
TIANSE waa brand ugu muhiimsan ee sahayda xafiiska Hanti- ee Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Waxaa qoreysa kharashka-oolnimada, design cusub, midabada hodan iyo doorashooyin kala duwan. brand TIANSE ayaa si rasmi ah u soo galeen suuqa tan iyo 2014, ku takhasusay isticmaalo daabacaadda xafiiska, taas oo waxaa lagu gadaa on Tmall.com, JD.com iyo dhufto ee kale e-commerce. Waxa uu si degdeg ah u noqdaan Dhuxul doorbiday isticmaalo daabacaadda qeybiyaha suuqa e-commerce ee maxalliga ah.
Iyadoo saldhig wax soo saarka ah oo daboolaya 35,000 oo mitir oo laba jibbaaran in Huizhou, shan bakhaarada waaweyn ee Shiinaha iyadoo wadar ahaan meel bakhaar ilaa 10,000 oo mitir oo laba jibbaaran, xirfadeed 193 xarumaha adeegga macaamiisha iyo in ka badan 2,300 oo warbaahinta iskaashi heer qaran ah, shirkadda damaanad qaadi karno bixinta si degdeg ah oo wakhti iyo bixiyaan macaamiisha adeegga xirfadeed iyo qadarin-iibka ka dib, sida runta ogaaday adeegga one-stop.
R Strong & D Karti
Iyada oo ah koox xirfad R & D, aan muhiimad weyn in ay hal-abuurnimo iyo design. Waxaanu qiimaynaa fikrado hal abuur leh oo ay ku dadaalaya si ay u sameeyaan habab iyo hagaajinta on waxyaabaha our.
Iyada oo waayo-aragnimo warshadaha hodan iyo nidaamka tayada adag, waxaan diirada ku saabsan waxa aannu ku samayn lahayn oo go'an oo shir ku si loo hubiyo in macaamiisha our kaliya helaan wax soo saarka ugu tayada sareeya.
Silsilado sahayda deggan, fikradda macaamiisha-oriented iyo koox adeegga macaamiisha xirfadeed, waxaan bixinaa adeegyo aan-iib aheyn ka dib oo dhan-ku wareegsan iyo qadarin pre-sale, in-sale iyo macaamiisha oo dhammuba aannu waqtiga oo dhan.